သူကြီးမင်းသို့ပေးစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သူကြီးမင်းသို့ပေးစာ
Posted by အာဂ on Jun 16, 2011 in Creative Writing, Letter to The Editor, Myanmar Gazette | 26 comments
မန္တလေးဂေဇက် အယ်ဒီတာအဖွဲ့ မှတစ်ဆင့်
အကြောင်းအရာ။ ။ အကြံပြုဆွေးနွေးခြင်း
ကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်။ အခုဆိုဒ်ပုံစံပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာ ။အရင်ကလို ပိုစ်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ရော စာအမြည်းလေးပါ မဖတ်ရတော့ပါဘူး နောက် ဓာတ်ပုံအမြည်းလည်း မမြင်ရတော့ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် ပြသနာက ဘာလဲဆိုတော့ အခုတစ်လော ပုံတစ်ပုံ (အနှစ်သာရရှိတဲ့ပုံဆိုရင်မပြောလိုပါ)။ စာတစ်ကြောင်း၊ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနှင့် ပိုစ်များ ခပ်များများတွေ့လာရပါတယ်။ ဒီလိုတွေ့လာလို့ တင်တဲ့လူတွေ ကို လည်းအပြစ်မပြောပါဘူး။ဒါကသူ့အပိုင်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ လူဘက်အပိုင်းကျတော့ ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ အရင်လိုအမြည်းလေး မမြင်ရတော့ ကွန်မကောင်းရတဲ့အထဲ ခေါင်းစဉ်ဆန်းတဲ့ ပိုစ် ကိုရွေးနိုပ်ရတဲ့အခါမှာ စောစောကပြောသလို ၁ပုံ(အနှစ်သာရရှိသောပုံမဟုတ်သော)၊၁စာ(အဓိပ္ပယ်ကင်းမဲ့ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်သော)၊ အရသာမဲ့ စာပုံများ တက်လာသောအခါ ကုန်သွားသောအချိန်အတွက်များစွာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူကြီးအနေဖြင့်တက်နိုင်ရင် Home page ပေါ်ကပိုစ်ဘေးမှာ Words(….) စာလုံးရေဘယ်လောက်ရှိတယ် ဆိုတာလေးများ ထည့်သွင်းပေးနိုင်ရင် စာဖတ်သူအနေနဲ့ စာအနည်းအများသိနိုင်ပြီး အဆိုပါ ပိုစ့်များ အား မှားနိုပ်မိခြင်းဒဏ်မှ လွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်လို့ ကူညီထည့် သွင်းပေးဖို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
ရွာသားပေမို့ပဲ မစ္စတာ ဆိုပါလား။ အကြံပြုချက်လေးကတော့ ကောင်းပါတယ်။
မစ္စတာမောင်မှိုင်းကိုအားကျလို့လေ..။နောက်ဆိုရင် သာဂိ ၊ သာလှ တို့ သာဝ တို့ နာမည်များ ပေးရန်စဉ်းစားထားပါကြောင်း…..ပါခင်ဗျ။
ပုံနဲ့ စာအမြည်းပါတော့ အကြမ်းဖျင်း ဖတ်ရရင် ပို အဆင်ပြေတယ် ပိုစ်တိုင်း လိုက်ဖတ်ရတာ ဖွင့်ရတာ သိပ်အဆင်မပြေလှဘူး။
လောဘ ဒေါသ မောဟ မနာလိုစိတ် တွေ ကင်းဝေကြပါစေ။
“ဘုရား တရား သံဃာ ” ဖြစ်လေစွ ဖြစ်လေစွ အဆွေတော်ကို ရည်ညွန်းရေးသားထားခြင်းလည်း မဟုတ်။ မနာလိုစရာ အကြောင်း အဘယ်သို့မှလည်းမရှိပါ။ ဆွေတော် တစ်နေ့တည်း သို့မဟုတ် တစ်ထိုင် တည်း ကြိုက်သလောက် ပိုစ့် များ ကိုတင်နိုင်ပါသည်။ ကြိုက်သလောက် အဿပြာပှိုင့် များလည်း ကြိုက်သလို ယူ၍ ကြိုက်သလောက် ပိုင်စားစေနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ဘဏ္ဍာတော် အဿပြာများထွက်သွားခြင်းမဟုတ် ၍ မည်သို့မှမဖြစ်ပါ။ ကျွန်ပ် ကြုံတွေ့နေရသော လောကအခက်အခဲကိုသာ တင်ပြဖြေရှင်းခြင်းမည်ပါသည်။ ဤသို့ ကျွန်ုပ်ရေးသားမိ၍ အဆွေတော် အကျိုးစီးပွား ပျက်စီးမည်ဆိုက ကျွန်ုပ်အလေးအနက်ထားတောင်းပန်အပ်ပါသည် အဆွေတော် နောက်နောင်များတွင်လည်း အဆွေတော်အနေဖြင့် တစ်ပုံ၊တစ်စာ၊ များ အမြောက် များရေးသားနိုင်ပါစေလို့ လည်း ဆုမွန်ကောင်းခြွေလိုက်ပါသည် အဆွေတော်။ ကျွန်ုပ်၏ အခက်အခဲ ကိုသာတင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပြီး အဆွေတော်နှင့်တစ်ကွ အခြားသောမည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါကြောင်း ဤသစ္စာစကားမှန်ကန်ပါက ဘ၀ဆက်တိုင်း လူပြောသူပြောခံဘေးမှကင်းလွတ်ရပါစေသတည်း ဟု ကျွန်ုပ် မောင်အာဂ မဟာပထ၀ီမြေကြီး အားပိုင်စိုးသော ၀ဿုန်သနြေနတ်မင်းအား တိုင်တည်သစ္စာဆိုအပ်ပါသည် အဆွေတော်.။ အဆွေတော် ကျန်းမာ၊ချမ်းသာပြီး ပုံများများတင် စာများများရေးသားနိုင်ပါစေသတည်း။
စာမြည်းလေးတင်ဖို့ သူကြိးကိုတော့အကြံပြုဘူးပါတယ် ….
သူကြီးမင်း မအားသေးဘူးနဲ့တူတယ် ….။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် အများသဘောပေါ့ လက်ခံရမှာပေါ့….
ဒါကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့အမြင်ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်
မစ္စတာအာဂ ( မစ္စတာထည့်တဲ့နောက်တော့ မောင်မထည့်နဲ့တော့လေကွယ် ကိုယ့်နာမည်က အာဂဘဲဟာပဲ )
( လီဗာနည်းနည်းတင်မယ်နော် ) တစ်ချို့ပုံတွေကြတော့ တော်တော်စောက်ချိုးမပြေဘူး
အွန်လိုင်းထဲမှာ ပိုပြီးတောင် စားချင်းစရာ ဟင်းအမယ်ပုံတွေအများကြီး
တစ်ချို့ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ပုံတွေကြတော့ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူး ( ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ပါ )
ရလောက်ပါတယ် ( ဒါတွေက ကိုယ့်အထင်ကိုပြောတာနော် )
စာမြည်း ပုံမြည်း ရရင်ပိုကောင်းမည်ဟုထင်မြင်ပါကြောင်း
လင့် ကို ၀င် ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြပါအုန်း။
ရွာထဲက ရွာသားတွေ အချင်းချင်း ရင်းနှီးတဲ့ သဘောနဲ့ သာစေ နာစေ မဟုတ်ပဲ နောက်ပြောင်တာနဲ့ လုံးဝ မတူပါဘူး။ နာမည်တွေသာ ယူသုံးနေတာ ယောကျား လား မိန်းမ လား မှန်းတောင် မှန်အောင် တောင် မသိဘူး
((( ။ဘော်ဒါအရင်း ခေါက်ခေါက်ကြီးတွေကို အမှတ်တရဖြစ်အောင် မင်းသား မင်းသမီး လူကြမ်း ဇာတ်ပို့ အဖြစ်သုံး ထားပါသည်။ )))
အဲဒီ စာဖတ်လိုက်ရင် မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းများ ဖြစ်နေမလား တွေးနေမိအောင် ညာဖြီး ရေးထားသေးတယ်။
ကြီးမှန်း မသိ ငယ်မှန်း မသိ တရွာလုံးက လူတွေ ကို မိုက်ရိုင်း စော်ကားနေတယ်။
ရွာသူ ရွာသားတွေနဲ့ ရင်းနှီးအောင် ရေးချင်တယ်ဆိုရင် တခြားပျော်ရွှင်စရာ ဇာတ်လမ်းတွေ ဆင်ပြီး ရေးလို့ရပါတယ် … အဲဒီပို့စ်ရေးထားတာက အဖေအရွယ်မှန်းမသိ ဘာမှန်းမသိ၊ အများပြည်သူ ဖတ်တဲ့နေရာမှာ အဲလို မဟုတ်တရုတ်ဇာတ်လမ်းတွေ မရေးသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် …
ကိုအာဂပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ် … ကွန်မကောင်းတဲ့အတွက် စာမြည်းလေးထည့်ထားပေးတော့ မဖတ်ချင်တဲ့ အကြောင်းအရာဆို ကျော်ဖတ်သွားလို့ရတာပေါ့ ….
ဒါဆိုရင် ရေးသူဖတ်သူ နှစ်ဖက်လုံးအတွက်မျှတပါတယ်။
ရေးသူကလဲ သူစိတ်ထဲ နှစ်သက်တာကိုရေးပါလိမ့်မယ်။
သူကြီးရေ အရင်လို စာမြည်းလေးပြန်ထည့်ပေးစေချင်ပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်မျှော်မြင် တဲ့ ဘဝမျိုးကို တောင့်တ နှစ်သက်မိပါတယ်၊
ကျွန်တော်လဲ ကြိုက်မယ်ထင်တဲ့ posts ကိုမှ ရွေးဖတ်တတ်သူပါ၊
မကြိုက်တဲ့ posts တွေကို မဖတ်ပါဘူးခင်ဗျာ၊
ကျွန်တော် ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ ပြည်သူ့အော်သံ ပါပဲခင်ဗျာ၊
ကြိုက်နှစ်သက်ရာများကို ရွေးချယ်ဖတ်ရှု ခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးလို့ထင်မိပါရဲ့…။
စာမြည်းလေးပါတာ ကြိုက်တယ်လို့ ထောက်ခံမဲ ၀င်ပေးပါရစေ။အချိန်ကုန် သက်သာစေဘို့ပါ။
စာမြည်း ထည့်ပေးထားရင် connection မကောင်းတဲ့ နေရာကသူတွေအတွက် ရွေးချယ် ရတာပို လွယ်သွားမှာပါ…စာလုံးရေ ပါ ထည့်ပေးနိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ….
ပြည်တွင်းပရိတ်သတ်တွေမှာလဲ ပိုစ့်တိုင်းဝင်ဖတ်ကြည့်ဘို့ ကွန်နက်ရှင်အခက်အခဲရှိပါတယ်။
ပြည်ပ ပရိတ်သတ်တွေဆိုဦးတော့ ကိုယ်မကြိုက်လောက်တာကို အချိန်ကုန်ခံပြီး ဖွင့်မကြည့်ချင်လောက်ပါဘူး။
ပိုစ့်ပိုင်ရှင်အဖို့လဲ သူတင်တာ ဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားမှုရတယ်ဆိုတာ မှန်မှန်ကန်ကန် သိနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်။
သူကြီးမင်း အဆင်ပြေတဲ့တနေ့မှာ ရွာသားတွေရဲ့ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းမယ်လို့ယုံကြည်ရင်း ….
လောလောဆယ်တော့ စာရေးသူအမည်ကိုသာ ရွေးဖတ်ရန်ရှိပါကြောင်း….။
တခါက တယောက်ယောက်ပြောဘူးသလို ဖတ်သူက ပိုစ့်ကိုပါ like/dislike လုပ်နိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်မြင်ပါကြောင်း။
etone အဲ့ဒီတုန်းက သဂျီးကိုပြောဖူးသေးတယ် သူက နှာစေးနေတယ်ထင်ပါ့ ..။
အပေါင်းအနုတ် ရွေးခွင့် ပေးထားတာက like / dislike သဘော မျိုး နဲ့ တူမယ် လို့ ထင်ပါတယ်
အခုက comment ကိုပဲ အပေါင်းအနှုတ် လုပ်လို့ရနေတာလေ။
post ကိုသာ like / dislike လုပ်လို့ရရင် တကယ်ကြိုက်တဲ့ /မကြိုက်တဲ့ အရေအတွက်ကိုသိရမယ်။
ဥပမာ – like =45 / dislike=40 ဆိုပါတော့
အပေါင်းအနှုတ်နဲ့ အဖြေထုတ်ရင် “ကြိုက်တာ ငါးယောက်တောင်ရှိတယ်” လို့ ခံစားရတယ်။
like/dislike နဲ့ပြရင်တော့ ဆဲချင်တဲ့သူ “လေးဆယ်တောင်..ဟေ့..။” လို့
မစ္စတာ အာဂ ၏ အကြံပြုတင်ပြချက်အား..
လေးစားစွာ ထောက်ခံပါသည် သူကြီးမင်း..
ရွာထဲမှာ ပြသနာ တက်ရင် သဂျီး ငှက်ဖျား တက်နေလို့ စောင်ခေါင်းမူးခြုံ ကွေးနေပါတယ်။
ပြသနာ ပြီး ခါနီးမှ အဖျားကျတတ်ပါတယ်။ အဲဒါ ထုံးစံပါပဲ။
အဖျားကျပြီး နေကောင်းသွားတဲ့ အခါ ရွာထဲ ဆင်းပြီးတော့..
ရွာသူရွာသား အပေါင်းတို့ အမိန့်တော် မှတ်မယ်.. *^&%%$$%^&* နာခံကြ ဆိုပြီး လွယ်မယောင်နဲ့ ခက်ပြအောင် အမြဲ လုပ်ပါတယ်။
တော့ထင်မိတယ်။တရားဝင် Media site တစ်ခု ကိုယ် Feel လာသလိုလုပ်လို.ရတယ်။ဒါပေမဲ့သာမန်ဆိုရှယ်ဆိုဒ်
တစ်ခုလိုတော့မထင်ကြပါနဲ.။မန္တလေးဂေဇတ်ကြီးကိုသံယောဇဉ်ရှိလို. တိုးတတ်စေချင်လို.အမုန်းခံပြိးဝင်မန်းတာ။ဗမာပြည် connection ကိုလည်းထည့်စဉ်းစားကြအုန်း။ဗမာပြည်ထဲ
မှာတင်မြို့ပေါင်းစုံက၀င်ဖတ်နေကြတာ။ကိုယ်ဘာသာကိုယ် ဟီးဟီးဟားဟားစိတ်ကူးကိုခေါင်းစဉ်ဆန်းတွေပေးပြီးပို(စ်)တင်တော့ဖတ်ကြတော့မှာပေါ့။(1)အချက်စာဖတ်တဲ့သူတွေအတွက်အချိန်ကုန်တယ်။(2)အချက် အရေးမပါတာတွေနဲ.ငြင်းခုံနေရတော့အခင်အမင်ပျက်ရတယ်။
ကျွန်တော်လည်းဒီဆို(ဒ်)မှာ Member ၀င်ထားတာမကြာသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ၁နှစ်နီးပါးလောက်ဖတ်ပြီးတော့မှ
Member ၀င်တာ။ဒီက Senior ကျတဲ့သူတွေရဲ.စာတွေကိုဖတ်ကြည့်ရင်သူတို.စိတ်နေစိတ်ထားကိုပါဖတ်လို.ရတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတာ
ဒီဆို(ဒ်)ကိုတကယ်သိက္ခာရှိရှိ အများပြည်သူလက်ခံနိုင်တဲ့ဆို(ဒ်)တစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဒီထဲမှာလူတွေတစ်ပုံကြီး။ကိုယ်ဝင်ထားတဲ့ဆို(ဒ်)ဟာ ဟီးဟီးဟားဟားလုပ်စရာဆို(ဒ်)လားဆိုတာတော့စဉ်းစားပေါ့။အမုန်းခံပြီးဝင်ပြောမိပြန်ဗီ။ခက်တော့နေပြီ။
frontpage မှာ.. ခေါင်းစီးတွေချည်းမဟုတ်ပဲ..စာမြည်းထည့်ရင်… ရှေ့ မှာပေါ်နေတဲ့.. စာပုဒ်အရေအတွက်လည်း လျှော့ချရလိမ့်မယ်..။
အခုက.. ခေါင်းစီးပဲထားတာကြောင့် အခု ၃၀ထည့်လို့ရတယ်..။
စာမြည်းပါရင်.. အပုဒ်ရေ ၁၅-၂၀ပဲရလိမ့်မယ်…။
ဘာလို့လည်းဆိုတော့.. ဆာဗာက.. ထိန်းထားလို့ပါ..။
၀ယ်ကတည်းက.. ဆာဗာမှာ.. စိပီယူ၊မီမိုရီ စသဖြင့်ဘယ်လောက်အမျိုးအစားဝယ်ရမယ်ဆိုတာ ပါပြီးသားမို့ဖြစ်ပါတယ်..။
( အခုတေ့ာ..မအားတာမို့ ..ဆာဗာလည်း ၂ခုစာပေးဝယ်ထားပြီး ..၀က်ဘ်ဆိုက်ကိုမရွေ့ နိုင်သေးပါဘူး..။)
ရွာသားတွေထဲ.. ကျွမ်းကျင်သူရှိရင်.. နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ… အကြံညဏ်တောင်းချင်ပါတယ်..။
ဂဂ ရဲ့ တောင်းဆိုချက် လေးနှစ် တိတိ (နီးပါး) မှာ
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း တစ်ယောက်ယောက် သည် တစ်ခုခု ကို ပြောင်းလဲဖို့ လုပ်နေခြင်း ကို ဖြတ်ကနဲ ဖြတ်ကနဲ မြင်နေရသည်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ နည်းပညာ ပိုင်းရော၊ ဘတ်ဂျက်ပိုင်းပါ လိုတာမို့ သူကြီးမင်း အတွက် နဲနဲနောနော စွန့်စားမှု တော့ ဟုတ်မယ်မထင်။
ရွာကို ချစ်ပုံများ။ အိုး လာ လားးးးးးး: